Moto X4, akpa echiche | Gam akporosis
Moto X4, akpa echiche
Motorola na Lenovo kpughere ndị Moto X4 na mbipụta ọhụrụ nke IFA na Berlin. Ngwaọrụ na ihe ijuanya na ogo ya agwụcha na mgbakwunye inwe usoro igwefoto abụọ nke na-enye ohere ịme foto na bokeh ma ọ bụ na-elekwasị anya.
Ugbu a, anyị abịaruola nso onye nrụpụta ahụ n'ime IFA na Berlin iji nwalee ekwentị ezinụlọ X. N'enyeghị anyị nsogbu ọzọ, anyị ga-ahapụ gị na nke anyị Mmetụta mbụ mgbe nwalere Moto X4 na IFA 2017.
2 Nka na ụzụ e ji mara Moto X4
Banyere imewe nke Moto X4, kwuo na onye nrụpụta arụla nnukwu ọrụ. Ekwentị nwere aru nke ejiri obi uto mee nke na-enye onu ogugu a dị ezigbo mma na-adị. O nwekwara okpokoro aluminom nke gbara ya gburugburu na-enye ihe mgbakwunye ya na nke oma.
Ekwentị adịghị oke arọ ma na-adị ezigbo mma na aka, na-abụ ezigbo ngwaọrụ dị mma. Enwere m ike njiri mara njirimara nke bọtịnụ na ike nke Moto X4 nke na-eme ka ọ dị mfe ịkọwa ọdịiche dị na igodo njikwa olu.
Ke ofụri ofụri, ekwentị na-ọma wuru na n'agbanyeghị ịbụ a elu n'etiti-nso eziokwu bụ na-arụ ọrụ na nke a n'akụkụ bụ karịa ezi.
Nka na ụzụ e ji mara Moto X4
Eke Lenovo - Motorola
Nlereanya Moto X4
Ihuenyo 5.2 inch LTPS IPS Full HD + Corning ozodimgba iko
Mkpebi 1080 x 1920
Pixel njupụta kwa inch 424 ppi
Nhazi Qualcomm Snapdragon 630 nwere etiti asatọ nke 2.2 GHz
GPU Adreno 508 ruo 650 MHz
Nchekwa n'ime 32GB ma ọ bụ 64GB gbasaa site na oghere kaadi nchekwa microSD maka 2 ọzọ TERAS
Isi ụlọ Dual - 12 MPX nwere oghere nchọpụta autofocus (PDAF) f / 2.0 + 8 MPX Wide Angle nwere oghere nlele 120º na oghere f / 2.2 + Dual LED flash na agba agba
Igwefoto ihu 16 MPX obosara na oghere f / 2.0 + Flash / selfie ìhè
Njikọ Bluetooth 5.0 BLE - Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4GHz + 5GH - 4G LTE + 3.5 mm jack jack + Nano SIM + Dual SIM
Sensọ Ihe mkpisiaka na-agụ + Ike ndọda + Nso nso + Accelerometer + Ambient light + Magnetometer + Gyroscope + Sensor hub
Ustjá na mmiri na-eguzogide IP68
Batrị 3.000 mAh na-enweghị ike iwepu + 15 W TurboPower maka oge 6 nke ike naanị na 15 nkeji
Ebe GPS + GLONASS + Galileo
Akụkụ X x 148.35 73.4 7.99 mm
Ibu ibu 163 grams
Agba Super Black + Na-acha anụnụ anụnụ
Nyochawa ya na Moto X4 bụ ezigbo ekwentị nke ga - enyere gị aka ịnụ ụtọ egwuregwu ọ bụla ma ọ bụ ngwa ọ bụla na - enweghị nsogbu, n'agbanyeghị etu eserese ha chọrọ. Nnwale ndị m meworo na ihuenyo gosipụtara ogo nke ogwe ahụ Super AMOLED, ndị dị otú ahụ doro anya na-egbusi agba.
Igwefoto nke Moto X4 bụ ihe ọzọ n'ime ike nke ekwentị na, eziokwu nke inwe na a sọrọ oghere usoro nke na-enye gị ohere iji foto bokeh ma ọ bụ nke na-elekwasị anya na-enye ekwentị ọhụrụ Motorola ekwentị n'ihu.
Nkọwa ndị ọzọ nke juru m anya, maka, bụ eziokwu ahụ bụ na Moto X4 na-eguzogide ájá na mmiri, njirimara nke njedebe nke elu-etiti kwesịrị inwe, yabụ na nke a, m ga-ekele ndị otu Motorola.
Ngwaọrụ zuru oke nke na-ejigide akara nke Motorola gosipụtara: ezigbo ọnụ na ọnụ ahịa ezi uche; Moto X4 ga - efu naanị euro 399 mgbe ọ rutere n’ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Moto X4, akpa echiche
Onye isi Droid dijo
Ezigbo ozi ekele n'ezie
Zaghachi Droid Boss
Sony Xperia XZ Premium, mbụ echiche